Ho vita hatreo ny gaboraraka etsy Analakely, Tsaralalana, … : sorina daholo ny mpivarotra amoron-dalana | NewsMada
Nidina ifotony nanao fanentanana sy nampiomana mialoha ireo mpivarotra amoron-dalana eny Analakely, Tsaralalàna sy ny manodidina, omaly ny polisy avy ao amin’ny CSP1 Analakely. Tsy maintsy hirosoana ny fanesorana azy ireo, amin’ny herinandro ambony io.
Nentanina aloha! Nidina teny Tsaralalana sy Analakely ary ny manodidina ny polisy ao amin’ny kaomisarian’ny boriborintany voalohany (CSP1) etsy Analakely, omaly alatsinainy. Nentanina ireo mpivarotra ary mampiomana azy ireo mba hiala amin’ny toerana ary hanatona ny kaominina hahafantaran’ny mpivarotra ny faritra tokony hivarotana. Tsotra ny tanjona, hanalefahana ny fitohanan’ny fifamoivoizana sy ahafahan’ny mpandeha an-tongotra mandeha eny amin’ny sisin’ny arabe. Entina ihany koa hanabeazana ny mpampiasa lalana ao anatin’ny fanarahan-dalàna.
Aorian’izao fanentanana nataon’ny polisy izao, hiroso amin’ny fanalana ireo mpivarotra izy ireo amin’ny herinandro manaraka iny raha toa ka mbola mahita mpivarotra amoron-dalana eny Analakely sy ny manodidina.
Gaboraraka, fahazaran- dratsy
Tsy vao izao ny finiavana hanalana ny mpivarotra amoron-dalana eto an-dRenivohitra. Tsy nety tanteraka satria tsy ampy ny tena fandraisana andraikitra ka nanjaka ny gaboraraka sy ny tsy fanarahan-dalana. Samy nanao izay saim-pantany ny mpivarotra amoron-dalana, ny fiara tsotra, indrindra ny mpitatitra tsy manaja ny lalana mifehy ny fifamoivoizana ary na ny mpandeha an-tongotra koa aza. Sarotra ny mifehy azy ireo satria tsy mitsaha-mitombo ny isan’ny mpivarotra, ny fiarakodia sy ny moto mivezivezy, sns. Tsy maintsy raisina anefa ny fepetra, ampiharina ny lalàna ho an’ny rehetra, satria tombontsoa iombonana raha tena tiana ny hisian’ny fivoarana sy ny fandrosoana.
Azo heverina fa tsy hionona eny Analakely sy Tsaralalana ary ny manodidina ity fepetra raisin’ny tompon’andraikitra ity, fa hiitatra any amin’ireo toeran-kafa, toy ny eny Isotry, Mahamasina, Mahazo, Anosibe, Andravoahangy, sns. Ho an’ity farany, maro ny latabatra tsy misy mpivarotra ao anaty tsena, fa mirongatra mivoaka aty amin’ny arabe izy ireo. Maika daholo izany rehetra izany.